ဒီမိုကရေစီရေးလုပ်ရှုားနေကြသောမျိူးချစ်မြန်မာများအားလုံးက "မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ် "န အ ဖ" တို၏ မေလ-၁၀-ရက်နေ့ ဆန္ဒခံယူပွဲကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြီး ကြက်ခြေခတ်ကြပါ၊၊
Posted by koyinaw at 4:08 AM0comments
မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းက မြို့ တစ်မြို့မှာ မိမိ သီတင်းသုံးနေစဉ် နယ်စပ်က ရွာလေး တစ်ရွာမှာ ကျောင်းမနေနိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို ဘာသာခြားတွေက ခေါ်သွားပြီး သူတို့က ကျောင်းထားပေးတယ် တဲ့။ အဲဒီလိုနဲ့ပဲ ကလေးတွေဟာ ဘာသာခြားတွေဆီ ရောက်သွားပြီး ကိုယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကနေ ဘာသာခြားတွေ ဖြစ်သွားကုန်ပြီ တဲ့။
အင်း…ကြားလိုက်ရတဲ့ သတင်းကတော့ ကိုယ့်အမျိုး၊ ကိုယ့်ဘာသာ ပျောက်တော့မယ့် ကိန်း ဆိုက်နေပါ ပေါ့လား။ အဲဒီ ရွာမှာ ရှိကြတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေက ဘာများ လုပ်နေကြပါလိမ့်။ မဖြစ်သေးပါဘူး။ အဲဒီကိစ္စ မိမိနိုင်တဲ့ ဘက်က လိုက်လုပ်ဦးမှပဲ။ အဲဒါနဲ့ မိမိသည် အဲဒီ နယ်စပ်ရွာက ရွာခံ သီလရှင်တစ်ပါးကို လိုက်စုံစမ်း တော့တယ်။
ဟော… တွေ့ပါပြီ။ ဈေးကြီးထဲမှာလေ။
“တပည့်တော်ရဲ့ ကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ ကလေးတွေအတွက် ဆန်နဲ့ ကုန်ခြောက် လေးတွေ ၀ယ်နေတာပါဘုရား”
“ကလေးတွေက ဘယ်ကတုန်း ဆရာလေးရဲ့”
“တပည့်တော်တို့ရဲ့ ရွာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသက မိဘမဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ကျောင်းမနေနိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို ခေါ်လာပြီး စောင့်ရှောက်ထားတာပါ”
“အင်း… ကလေးတွေကို စောင့်ရှောက်ထားတာ ဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့ ဆရာလေး။ အခု ဈေးဝယ်ပြီးလို့ ဆရာလေးရဲ့ သီလရှင်ကျောင်းကို ပြန်တော့ မလို့လား?”
“ဒါဆို အတော်ပဲ။ ဦးပဉ္ဇင်းလည်း ဆရာလေးကို လိုက်ရှာနေတာ။ ဆရာလေး မသယ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဦးပဉ္ဇင်းကို ပေး”
မိမိလည်း ဆရာလေး ဆီက ဈေးဝယ်ပစ္စည်း တချို့ကို ကူသယ်ရင်း ဈေးအထွက် အပေါက်မှာ ဘာသာခြား သီလရှင် တစ်ဦးလည်း ဈေးဝယ်ပြီး ပြန်ထွက် အလာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ အဲဒီ ဘာသာခြား သီလရှင် ၀ယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကျွန်ုပ်မြင်လိုက်ရတယ်။ အိုဗာတင်းဘူးတွေ၊ မိုင်လိုဘူးတွေ၊ ဘီစကစ် မုန့်ထုပ်တွေ၊ ပြီးတော့ တန်ဘိုးကြီးတဲ့ စားစရာတွေချည်း ပါလား။
မိမိကလည်း ကိုယ့်ဆရာလေး ၀ယ်ထားတဲ့ ဈေးပစ္စည်းတွေကို အခုမှပဲ သေသေချာချာ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ကလေးတွေကို ကျွေးဖို့ ဈေးပေါတဲ့ ဆန်ကြမ်းနဲ့ ဈေးသက်သာတဲ့ အာလူး၊ ငရုပ်၊ ကြက်သွန်တို့ပဲပေါ့။ ကျွန်ုပ်လည်း စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ဆရာလေးကို ပြောလိုက်တယ်။
“ဆရာလေးက ဈေးသက်သာတဲ့ စားစရာတွေပဲ ၀ယ်ပြီး ကလေးတွေကို ကျွေးနိုင်တာလား။ ဟိုက ဘာသာခြား သီလရှင်ကတော့ ၀ယ်ထားတာ အကောင်းစားတွေ ပဲလေ”
“ဟုတ်ပါတယ်ဘုရား… အဲဒီ ဘာသာခြား သီလရှင်ရဲ့ ကျောင်းက တပည့်တော်ရဲ့ ကျောင်းနဲ့ သိပ်မဝေးပါဘူး ဘုရား။ သူတို့က ငွေတတ်နိုင်တော့ သူတို့ ကလေးတွေကို အကောင်းစားတွေချည်းပဲ ကျွေးကြတယ်လေ”
အင်း… ဘာသာခြား သီလရှင်မှာ ငွေတွေတော်တော် ပေါတာပဲ။ သူတို့မှာက အလှူငွေတွေ များများ ရတယ် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ သူဌေးတွေ အများကြီးပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ ငွေတွေကို ဘယ်နေရာတွေ မှာများ သွားပြီး အသုံးချနေကြလဲ မသိပါဘူး။ အခုလို သာသနာပြု လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်နေကြတဲ့ သီလရှင်လေးတွေ ကိုလည်း ဒကာ၊ ဒကမတွေက လှူဒါန်းကြရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ လို့ မိမိ တွေးနေမိတယ်။
“ဆရာလေးရဲ့ ကျောင်းကလည်း ဆောက်တုန်းပါလား”
“မှန်ပါ… တပည့်တော်လည်း အလှူခံ ရတဲ့ ၀တ္ထုငွေလေးတွေကို စုဆောင်းပြီး ဒီလို ကျောင်းငယ်လေး ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစား ခဲ့ရတာပါ ဘုရား”
“အေး…ဦးပဉ္ဇင်း ဆရာလေးဆီကို ကြွလာရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ဆရာလေး တို့ရဲ့ နယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ဘာသာခြား သာသနာပြုတွေက ကျောင်းမနေနိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို ကျောင်းထား ပေးနေတယ် လို့ ကြားတယ်”
“တပည့်တော်လည်း ကြားပါတယ် ဘုရား။ တပည့်တော်က ရွာတွေ ဆင်းပြီး ကလေးတွေကို ခေါ်ချင်ပေမဲ့ ငွေက မတတ်နိုင်တော့ ရှိတာလေးနဲ့ပဲ ရုန်းကန်နေရတာ ဘုရား”
“ဟုတ်ပြီ… ငွေက ဦးပဉ္ဇင်းရဲ့ ဒကာတစ်ယောက်မှာ အကူအညီတောင်းပြီး ဦးပဉ္ဇင်းနဲ့ ဆရာလေး အဲဒီ ရွာတွေကို ဆင်းပြီး ကလေးတွေကို သွားခေါ်ရအောင်”
“ကြားရတာ ၀မ်းသာစရာပဲ ဘုရား။ တပည့်တော်က ကလေးတွေကို ဆင်းခေါ်ချင်နေတာ ကြာပြီ ဘုရား။ အချိန်ကြာလာရင် အဲဒီ ရွာတွေက ကလေးတွေဟာ ဘာသာခြားတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ နောက်ဆိုရင် ရွာမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတောင် ရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ဘုရား”
မိမိလည်း ဆရာလေးရဲ့ စကားကို ကြားလိုက်ရတော့ သိပ်ကို လေးစားသွားတယ်။ တို့သာသနာမှာ ရှိကြတဲ့ သီလရှင်တွေမှာလည်း အဲဒီလိုမျိုး အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ချစ်တဲ့ စိတ်တွေ ထက်သန်ကြရင် သာသနာအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက သိပ်ကို အကူအညီ ရတာပေါ့။
ဒကာတစ်ယောက်ကို အကျိုးအကြောင်း ရှင်းပြတော့ အဲဒီ ဒကာကလည်း စေတနာ ပါပါနဲ့ပဲ လိုအပ်တဲ့ ၀တ္ထုငွေကို လှူပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီလို ဒကာမျိုးတွေလည်း သာသနာမှာ အများကြီး လိုအပ်တာပဲ။ ဘုန်းကြီးဆိုတာ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးမှ မရှိတာ။ ဒကာ၊ ဒကာမတွေ လှူဒါန်းမှပဲ အဆင်ပြေကြတာပဲလေ။
မိမိနှင့် သီလရှင်လည်း နယ်စပ်က ရွာတစ်ရွာကို ရောက်သွားပြီ။ ဆရာလေးကတော့ သူ့ရဲ့ ဆွေမျိုးအိမ်မှာ တည်းနေပြီးတော့။ ကျွန်ုပ်ကတော့ အဲဒီရွာရဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးရတယ်။ ရွာကျောင်းက ဆရာတော်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်။
“ဆရာတော်တို့ ရွာဘက်ခြမ်းတွေမှာ ဘာသာခြား သာသနာပြုတွေက ကျောင်းမထားနိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို ကျောင်းတွေ ထားပေးဖို့ ခေါ်ဆောင် သွားကြတယ် လို့ ကြားတယ် ဘုရား”
“အေးလေ… ဒီလိုပဲ သူတို့က ခေါ်နေကြတာပဲ”
ရွာကျောင်းဆရာတော်ရဲ့ စကားကို ကျွန်ုပ်ကြားလိုက်တော့ ဆရာတော်ဟာ မိမိကျေးရွာရဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားပြန့်ပွားရေး လုပ်ဆောင်နေရာမှာ အားနည်း နေသေးတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
“သူတို့က အဲဒီလိုပဲ ခေါ်နေကြတာ ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ဒီအတိုင်း နေလို့ မရဘူး ဆရာတော်။ တပည့်တော်တို့ကလည်း နိုင်တဲ့ ဘက်က ကိုယ့်ကလေးတွေကို စည်းရုံးပြီး မိမိဘာသာ သာသနာရဲ့ အနှစ်သာရကို အပေါ်ယံကပဲ သိဖို့မဟုတ်ဘဲ စိတ်ထဲမှာ လေးလေးနက်နက် သိအောင် လုပ်ပေး ကြရမှာက တပည့်တော် တို့ရဲ့ တာဝန်ပဲလေ… ဘုရား”
ရွာကျောင်းက ဆရာတော်ကို မိမိက ပြန်ပြီး ဆရာလုပ်နေသလိုတော့ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာတော်ကို မလျှောက်လို့ ကလည်း မဖြစ်ဘူးလေ။ “အင်း… ဒါနဲ့ တပည့်တော် တစ်ခုလောက် လျှောက်ပါရစေဘုရား။
ဆရာတော်တို့ ရွာတွေမှာက တစ်ခြား ဘာသာခြားတွေရော ရှိနေကြတယ် ဆိုတော့ ဘာသာမတူတာ အချင်းချင်း အိမ်ထောင် ပြုတာတွေရော ရှိကြလား ဘုရား?”
“ဒါဆိုရင် အဲဒီလို ဘာသာခြားနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တဲ့ လူငယ်တွေက ဆရာတော်ရဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို လာသေးလား ဘုရား?”
ရွာကျောင်းက ဆရာတော်ကတော့ ကျွန်ုပ်မေးတာကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ပြန်ဖြေပေးပါတယ်။
“ဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်တွေက ဘာသာခြားတွေကို အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ရင် သူတို့ အိမ်ထောင်ဖက် ဘာသာခြားနောက်ကိုပဲ လိုက်သွားကြတာပါပဲ။ ဟိုဘက် ဘာသာခြားက ပြောတယ် တဲ့လေ။ သူတို့ကို အိမ်ထောင်ပြုမယ် ဆိုရင် သူတို့ ဘာသာကိုပဲ ကိုးကွယ်ရမယ်တဲ့။ ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့တော့ အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားတာပေါ့”
“အဲဒီတော့ တပည့်တော်တို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်တွေကလည်း ဘာသာခြားကို ပြောင်းသွားရောလား ဘုရား”
“မှန်ပါ… ပြောင်းကုန်တာပဲ ဘုရား”
“ဒါဆိုရင် တပည့်တော်တို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်တွေမှာ ဘာသာရေး အနှစ်သာရ မရှိကြတာ အထင်အရှား ဖြစ်နေပြီပေါ့ ဆရာတော်။ ဒါကြောင့်မို့ …ဘာသာခြားရဲ့ နောက်ကိုပဲလိုက်ပြီး လူရော ကိုးကွယ်မှုပါ ပြောင်းသွားကြတာပဲ”
ရွာကျောင်း ဆရာတော်ကတော့ ခေါင်းတစ်ညိမ့်ညိမ့်နဲ့ နားထောင်နေတော့တယ်။
“တပည့်တော်က အခု ဒီရွာကို လာတာက ဒီရွာမှာ ကျောင်းမနေနိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို ကျောင်းထားပေးဖို့ လာခေါ်တာပါ ဘုရား။ နို့မို့ဆိုရင် ဒီကလေးတွေဟာ ဘာသာခြားတွေပဲ ဖြစ်ကုန်ကြတော့မယ် ဘုရား”
“အရှင်ဘုရားက ကျောင်းထားပေးမယ် ဆိုတော့ ဘယ်မှာများ ထားပေးမှာတုန်း”
“တပည့်တော်ရဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ဘ/က ကျောင်းမှာပါ”
“ဒါဆို တပည့်တော်လည်း အရှင်ဘုရားအတွက် နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီရမှာပေါ့”
မိမိလည်း သီလရှင်နဲ့အတူ ကျေးရွာတွေ တစ်ဝိုက်မှာ ခရီးထွက်တော့တယ်။ ရွံ့တောထဲမှာ လမ်းလျှောက်ရတဲ့ အခါလည်း ရှိ။ တောတိုးပြီး တောင်ပေါ်ကို တက်ရတဲ့ အခါလည်း ရှိ။ မိုးရွာလို့ တစ်နေကုန် မိုးစိုခံပြီး တစ်ရွာမှ တစ်ရွာကို ခြေကျင်ခရီး ကြွရတဲ့ အခါလည်း ကြွရတာပေါ့။ သာသနာပြု ခရီးစဉ်တွေဟာ တစ်ခါတလေ ဒီလိုပဲ ခရီးကြမ်း ထွက်ကြရတာပါပဲ။ ကျွန်ုပ်ကတော့ သာသနာ ပြုနေရတာလေးကိုပဲ စဉ်းစားရင်း ဘယ်လောက်ပဲ ပင်ပန်းပင်ပန်း ပီတိတွေ ဖြစ်နေရတာပဲ။
မိမိနှင့်အတူ ရွာသားတွေရော ဆရာလေးပါ မငြီးမငြူဘဲ တက်တက်ကြွကြွ ရှိကြတယ်။ မိမိက ရွာသားတွေနဲ့ ဆရာလေးတို့ကို ကြည့်ပြီး သာသနာချစ်စိတ် ထက်သန်တာလေးကို လေးစား ဂုဏ်ယူနေမိတာ။
မိဘမဲ့ ကလေးတွေ၊ ဆင်းရဲပြီး ကျောင်းမနေနိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို စည်းရုံးပြီး အပြန်မှာ စက်လှေနဲ့ ကျွန်ုပ်ရဲ့ ဘ/က ကျောင်း ရှိရာ မြို့ကို မြစ်ကြောင်းအတိုင်း စုန်ဆင်းခဲ့တယ်။ ကျောင်းဖွင့်စ ရာသီ ဇွန်လပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းမှာ မိုးက ကြီးတတ်တယ်လေ။ ကျွန်ုပ်တို့ စီးလာတဲ့ စက်လှေလေးကလည်း မိုးကို အံတုပြီး ခရီးနှင်နေတာပဲ။
စက်လှေထဲမှာ မိုးရေတွေ စိုရွဲနေတဲ့ကျွန်ုပ် ကတော့ မိုးရေတွေ စိုနေတာကို ဂရုမထားနိုင်အား။ မိုးတိမ်လိပ်တွေ၊ လျှပ်စီးတွေက ကျွန်ုပ်ကို ခြိမ်ခြောက်နေတာလည်း မမှု။ မိုးရေ မိုးစက်တွေရဲ့ အေးမြမှုထက် မိမိရဲ့ ရင်ထဲမှာ ပိုပြီး အေးမြစရာတွေ ရှိနေတာကိုး။
အဲဒါက…မိမိနဲ့ အတူပါလာတဲ့ ကလေးတွေဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ ဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့ အနှစ်သာရတွေကို သိကြပြီး ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမတွေကို လေးစား လိုက်နာကြလိမ့်မယ်။ လိမ္မာ ယဉ်ကျေး ကလေးတွေဖြစ်လာကြလိမ့်မယ်။ သူတို့လေးတွေဟာ သာသနာ့ အာဇာနည်လေးတွေ ပါလား။ကျွန်ုပ်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အဲဒီလို တွေးပြီး နေရတာလေးကိုက မိုးရေက အေးချမ်းတာထက် ကျွန်ုပ်ရင်ထဲမှာ အေးချမ်းနေတာ လေးကိုက … ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အလဲအလှယ် လုပ်နိုင် ပါဦးတော့မလဲ….
Posted by koyinaw at 7:58 AM0comments
On this very same full-moon day of the month of Vesakha (May), 2633 years ago, Siddhattha Bodhisatta was born in the Lumbini Park near Kapilavatthu ; 2598 years ago, he becameafully Enlightened One at the age of 35 under the Bodhi Tree at Buddha-Gaya ; 2553 years ago, the Buddha passed away at the age of 80 at Kusinara.
In fact, for Buddhists, Visak is of great significance for the above-mentioned three events of the Buddha; among those three too, the Enlightenment of the Buddha was the most important and significant event, since it did bring the light and freedom to the world, for this reason, he is called The Bringer of Light and Freedom. Accordingly indeed, his arising in this world was, is, and will be for the good, welfare and happiness of the multitude, for gods and men, and even for animals and beings in the lowest realms. It was on this very full-moon Day of Visak that it all started in this world and that the triumph of the Buddha himself and the world alike took place.
In reality, Visak is an adapted word for "Vesakha", which isaPali month name. The month of "Vesakha" is called Ka Sone La in Myanmar, and usually coincides with May. This is the reason why it is so called Visak. Now the word "Visak" has become an international word, noted even on the United Nations calendar.
On this Visak Day, it isacommon tradition for Buddhists all over the world to pour fragrant and pure water at the Bodhi Trees at the pagoda platforms or temples in commemoration of the Buddha or asamark of honoring the Buddha, remembering his unique virtues and match-less qualities. In addition, Maha Paritta, some Suttas (Discourses) and Patthana are either individually or in groups chanted together with observing the precepts, teaching and listening to the Dhamma, cultivating loving-kindness and practicing meditation. In this way, on this full-moon Day of Visak, the followers of the Buddha all over the world spend their time rightly and wisely. It is on this very Visak-full-moon Day that the hearts of Buddhists are truly imbued with merit and virtues. Whatamarvelous, precious and lucrative Day for the Buddhists!
May You Do Good and Be At Peace on this Visak!
Posted by koyinaw at 6:23 AM0comments
Posted by koyinaw at 10:15 AM0comments
“နှလုံးသား မြို့တော်” (သို့မဟုတ်) “နှလုံးရောဂါ နိုင်ငံတော်
အမျိုးသမီးနှင့် နှလုံးရောဂါ (NEJ / ၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉၊ ခေတ်ပြိုင်)
-နှလုံးရောဂါရနေသည့် အမေရိကန် အမျိုးသမီးပေါင်း (၈) သန်းရှိသည်။
-နှလုံးရောဂါရှိခဲ့သူ အမျိုးသမီးပေါင်း (၆) သန်းရှိသည်။
-နှစ်စဉ် နှလုံးရောဂါဒဏ်ခံရသည့် အမေရိကန် အမျိုးသမီးပေါင်း (၄၃၅,၀၀၀) ရှိသည်။
-အမေရိကန်နိုင်ငံသူတွေ အသက်ဆုံးရသည့် အကြောင်းများအနက် နှလုံးရောဂါကြောင့် သေသူ (၃၂) ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။
-နှလုံးရောဂါကြောင့် နှစ်စဉ်သေဆုံးသူ အမေရိကန် အမျိုးသမီးပေါင်း (၂၆၇,၀၀၀) ရှိသည်။
(ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၀၉) အထက်ပါ သတင်းစစ်တမ်းလေးကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်လေးကို ပြေးသတိရမိပါရဲ့။ ကျနော် တို့မိသားစု ရန်ကုန်ကို ပြောင်းပြီး မကြာခင်မှာ နယ်ဘက်က အသိအင်္ဂျင်နီယာ မလေးတယောက် ရန်ကုန် မှာ အလုပ်လုပ်ရင်း သူ့အမေကို ရန်ကုန်အလည်ခေါ်တာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးလက်က မိဘဆိုတာ ကိုယ့်သားသမီး ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်တယ်၊ အလည်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ မော်မဆုံး ပျော်မဆုံး ဂုဏ်ယူ မဆုံးပေါ့။ မိဘဆိုတာ သားသမီးလုပ်စာ စားရတာ မစားရတာထက် သားသမီးက ကိုယ့်ကို ဂရုတစိုက် ရှိ တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျေနပ်ကြတဲ့ မဟာလူသားတွေပဲ မဟုတ်လား။
ဒီလိုနဲ့ ရန်ကုန်တလွှား ဘုရားဖူးသွားပေါ့။ ဗမာပြည်မှာရှိကြတဲ့ ကျေးလက်က လူကြီးအများစု ပြောကြတာ ရှိတယ်လေ “ရန်ကုန်ရောက်ပြီး ရွှေတိဂုံကို ဖူးရရင် သေပျော်ပါပြီ” တဲ့။ အခုလဲ သမီးချစ် မိခင်ဟာ “ရန်ကုန် ဘုရားစုံဖူးရလို့ သေပျော်ပါပြီ” လို့ မပြောရုံပါပဲ။ အသက် (၆၀) ၀န်းကျင်အရွယ် မိခင်ဆိုတော့ အရွယ်ရှိ သေးတယ်-လို့ ပြောရမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျေးလက်မှာ မွေးဖွား၊ လယ်နဲ့ နွားနဲ့ ရုန်းကန် ခဲ့ရသူဖြစ်လို့ ရန်ကုန်အမြင်မှာတော့ အသက် (၇၀) ၀န်းကျင်ပေါ့။ ဘာပဲပြောပြော မာဆဲသာဆဲလို့ ဆိုရမှာ ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ဘုရားဖူးသွားရင်း အနဲငယ် မောပမ်းတာကို ချစ်သမီးက သတိထားမိတယ်။ ဒါနဲ့ ရွာမပြန်ခင် မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြပေးမယ်ပြောတော့ “ညီးကလဲအေ.. ရှာရှာပေါက်ပေါက် မလိုပါဘူး..၊ သွေးဆေးလေး သောက်လိုက်ရင် ပျောက်သွားတာပဲဥစ္စာ..” တဲ့။ မိခင်ရဲ့ ပြုံးနေတဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် “ဒါမှ ငါ့ သမီးဟဲ့..” လို့ လက်ခမောင်းခတ် မအော်ရုံတမယ်ပါပဲ။ နောက်နေ့မှာ မိခင်ကြီးကို ဆေးခန်းပို့ပါလေရော။ ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပြ။ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး မိခင်ကြီး ကျနော့အမေနဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ စကားပြောနေတုန်း အိမ်နောက် ကိုလာပြီး သမီးချစ်ခမျာ ငိုပါလေရော။
ကျနော်က အကြောင်းစုံကို မေးလိုက်တော့ “အမေ့မှာ နှလုံးရောဂါ ရှိနေတယ်..” လို့ ဆရာဝန်ကြီး က ပြောတဲ့အကြောင်း ပြန်ပြောပြလို့ ကျနော်လဲ မနေနိုင်တာနဲ့ “မာမာကလဲကွာ..၊ အဲဒီလို ပြောတိုင်းသာ ငိုနေရရင် တို့တနိုင်ငံလုံး မျက်ရည်နဲ့တောင် မြောသွားနိုင်တယ်” လို့ ပြောလိုက်တော့၊ “အကိုကလဲ ဘာဆိုင်လို့လဲ..” ဆိုတဲ့ ကျနော်အလိုချင်ဆုံး မေးခွန်းလေး ထွက်လာပါတော့တယ်။ ဒါနဲ့ ကျနော်လဲ ရှင်းပြ လိုက်တယ်…
“အေး.. မာမာလဲ ပညာတတ်ပဲ နားလည်မှာပေါ့။ တို့ဆီမှာ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး.. အရေးပေါင်းစုံ အခက်ကြုံနေရလို့ ကိုယ့်ဆီမှာ ဧည့်သည်လာလို့မှ ဧည့်ဝတ်မကျေနိုင်တဲ့ အခြေအနေ၊ ဧည့်ဝတ်ကျေသည်ထားဦး.. ကိုယ့်အိမ်မှာ ဧည့်သည်ညအိပ်မှာ စိုးရိမ်နေရတဲ့ ခေတ်ပျက်မှာ ဘယ်သူ စိတ် ချမ်းသာမှာလဲ။ ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာ သွားရေးလာရေးလဲ မလွယ်၊ စစ်ရေးကြောရေးကလဲ များ၊ မသူတော်တွေ ထင်တိုင်းကျဲနေတဲ့ အခါမျိုးမှာ မာမာကိုယ်တိုင် ဆေးစစ်ကြည့်လဲ နှလုံးရောဂါရှိတယ် ပြောလိုက်မှာပဲ။ ကိုယ်တို့ဆီမှာ စစ်မှန်တဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု မရှိလို့သာ မသိရတာ။ မှတ်မိသေးလား.. Signature Camping တုန်းက လက်မှတ်လေး ထိုးမိလို့ မာမာကိုယ်တိုင် တပတ်လောက် ခပ်ရွံ့ရွံ့ ဖြစ်နေတာလေ။ အဲဒါမျိုးတွေဟာ နှလုံးရောဂါရခြင်း အကြောင်းတွေထဲမှာ ပါတယ်လေ။ ကဲ.. ဒီတော့ ဆေးသွားစစ်ဖို့ ခေါ် သွားတဲ့သူမှာ အပြစ်အရှိဆုံးပဲ..” လို့ ပြောလိုက်တော့ “မာမာမှာ အပြစ်ရှိတယ်၊ ဟုတ်လား..?” တဲ့။ “နောက်တာပါကွာ..။ ခုလို မာမာ အမေ့ကို စောင့်ရှောက်တာကြည့်ပြီး တကယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သိထားတော့ ဆင်ခြင်လို့ ရတာပေါ့။ စောင့်ရှောက်လို့ ပိုလွယ်တာပေါ့..” လို့ ရှင်းပြလိုက်မှ “အင်း.. ဟုတ်သားပဲလေ..” လို့ ဆိုကာ သက်သာရာရသွားလေရဲ့။
ဒီနေရာမှာ အထက်က သတင်းစစ်တမ်းလေးဖတ်ပြီး ခံစားမိတာက “ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရှိ တဲ့ အမေရိကားမှာတောင် ဒီလောက် နှလုံးရောဂါသည်များရင် လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၅၅ ကျော်ရှိတဲ့ ကျနော် တို့ ဗမာနိုင်ငံမှာ တကယ်လို့များ စနစ်တကျ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနဲ့အတူ စာရင်းပြုစုလိုက်ရင်..
-နှစ်စဉ် နှလုံးရောဂါဒဏ်ခံရသည့် ဗမာနိုင်ငံသားပေါင်း…
-ဗမာနိုင်ငံသားတွေ အသက်ဆုံးရသည့် အကြောင်းများအနက် နှလုံးရောဂါကြောင့် ဆုံးသူပေါင်း…
-နှလုံးရောဂါကြောင့် နှစ်စဉ်သေဆုံးသူ ဗမာနိုင်ငံသားပေါင်း…
ဘယ်လောက်ဆိုပြီး ထွက်ပေါ်လာမဲ့ ဂဏန်းတွေကို မြင်ယောင်ကာ “နှလုံးသား မြို့တော်” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားရှိသလို “နှလုံးရောဂါ နိုင်ငံတော်” လို့ပဲ ကမ္ဗည်းတင်ရလေမလား..” လို့ တွေးရင်းတွေးရင်း ကျနော်ကိုယ်တိုင်ပင် နှလုံးခုန်နှုန်းတွေ မြန်လာပေမဲ့ နှလုံးအထူးကုနဲ့ ပြဖို့တော့ ကြောက်ရွံ့မိပါရဲ့…
Posted by koyinaw at 11:01 PM0comments
ထိုင်းနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ နိုင်ငံခြားပို့မည့် ပွဲစားခြေချင်းလိမ် ရဲရင့်မြင့်မောင် / ၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉ line
တတိယနိုင်ငံ ထွက်ခွာခွင့်ရရေးအတွက် ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ ဝင်ရောက်လာသည့် လူသစ်များကို အခကြေးငွေယူပြီး နိုင်ငံခြားထွက်ခွာခွင့်ရရန် စီစဉ်ပေးသူများထဲတွင် ဒုက္ခသည်စခန်းမှ တာဝန်ရှိသူအချို့နှင့် ဝန်ထမ်းအချို့ ပါဝင်ပတ်သက်မှု ရှိသဖြင့် မကြာခင် ကရင်ဒုက္ခသည်ကော်မတီ KRC မှ ဝန်ထမ်းများလိုက်နာရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြီး အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဟု မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ခေတ်ပြိုင်သို့ပြောသည်။
Posted by koyinaw at 10:41 AM0comments
myanmar KHIT SO GYI
Posted by koyinaw at 4:07 AM0comments
ပထမအကြိမ် မြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်များ Intensive English Course BPS ၊ ကန္ဒီမြို့၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ
ဇန်န၀ါရီလ ၁၂-ရက်နေ့မှ ၂၁-ရက်နေ့အထိ ၁၀-ရက် Intensive English Course ကို သီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော် အပါး-၃၀ တို့ တက်ရောက် ပြီးစီးခဲ့ကြသည်။ ကုသိုလ်ပညာပါရမီအဖြစ် သင်ကြားပေးကြသော ဆရာ၊ ဆရာမများမှာ---
၁။ Mr. Ken (USA)
၂။ Mr. Don (USA)
၃။ Mr. Raj (Canada)
၄။ Mr. Lal (Sri Lanka)
၅။ Mrs. Visakha (USA)
၆။ Mrs. Lalitha (Sri Lanka) တို့ဖြစ်ကြသည်။
သင်တန်းကျင်းပရန်ခန်းမကို ကန္ဒီမြို့ Buddhist Publication Society မှ မေတ္တာဖြင့် ကူညီပေးခဲ့သည်။ သင်းတန်းကျင်းပစဉ် ၁၀-ရက်အတွင်း၌လည်း ကန္ဒီမြို့မှ ဆွမ်းအလှူရှင်များက ၃-ရက်တိတိ နေ့ဆွမ်းများ သဒ္ဓါတရားထက်သန်စွာ လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။
သင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် Myanmar Student Monks Association (MSMA) မှ အဓိက စပွန်ဆာပေးလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
Posted by koyinaw at 3:55 AM0comments
Labels: news. photo
Posted by koyinaw at 1:24 AM0comments
Myanmar's Suu Kyi 'well'
YANGON - MYANMAR opposition leader Aung San Suu Kyi is well but has lost some weight, her lawyer said on Monday, following reports that she had refused new food supplies since Aug 15.
Mr Kyi Win, who met Ms Suu Kyi at her Yangon home where she has been under house arrest for five years, said she had not indicated whether or not she was onahunger strike.
'I am well, but I have lost some weight. I amalittle tired and I need to rest,' Mr Kyi Win quoted the 63-year-old Nobel Peace laureate as saying during their 30 minute meeting. -- REUTERS
Posted by koyinaw at 3:28 AM0comments
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဆမတ် ဆွန်ထော်ရဝေ့ခ်ျ မရှိတော့မှထိုင်နိုင်ငံတည်ငြိမ်လိမ်မည်
Posted by koyinaw at 5:53 AM0comments
Myanmar government denies Suu Kyi on hunger strike
The NLD won national elections in 1990 but the military never allowed it to assume power. The military has ruled Myanmar since 1962.
Posted by koyinaw at 2:27 AM0comments
ဒီနေ့ ၊ ဒီအချိန်
ဒီနေ့ဘယ်နှစ်ရက် ရှိပြီးလဲ